Xilka taliyaha cusub ee hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo loo magacaabay Gaashaanle Koofi – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xilka taliyaha cusub ee hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo loo magacaabay Gaashaanle Koofi
Wararka aynu ka heleyno xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid uu magacaabay taliyaha cusub ee hay’adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi).
Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) oo hore u ahaa taliyihii hore ee nabad-sugida gobolka Banaadir ayaa haatan loo magacaabay xilkaan cusub, waxaana ay arrinkaan ka dambeysay kadib markii beesha uu kasoo jeedo ay cabasho ka muujiyeen inaan xilal sare laga siinin dowladda federaalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, Koofi oo nin dhalinyaro ah ayaanan ilaa iyo haatan la ogeyn sida uu ula qabsan doono shaqada Hay’ada Socdaalka iyo Jinsiyadaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, maadaama ay tahay shaqo u baahan aqoon iyo khibrad badan.
Koofi ayaa markii uu ahaa taliyaha NISA ee gobolka Banaadir waxaa la sheegay in dad badan ay ku eedeyn jireen xad-gudubyo badan, taas oo keentay in markii dambe xilkaasi laga qaado.
Si kastaba ha ahaatee, xilkaan cusub ee loo magacaabay Koofi ayaa hore waxaa u hayn jiray Jeneraal C/laahi Gaafow oo isna dhawaantaan loo magacaabay taliyaha nabad-sugidda qaranka ee NISA, kadib markii xilkii laga qaaday taliyihii hore ee hay’addaasi C/raxmaan Tuuryare.